६ शब्दे उपन्यास - E Net Nepal
Home Amazing World ६ शब्दे उपन्यास
६ शब्दे उपन्यास
Unknown 11:06 PM Amazing World,
एउटा उपन्यास सामान्यतया कति शब्दको होला ? तपाइको सोचाइमा पक्कै पनि शब्द हैन पेजमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो होला। त्यो पनि एक पेज हैन कम्तिमा पनि २०/२५ पेज हुनुपर्छ। तर यदि तपाई यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाई गलत साबित हुनुहुनेछ। किनकि Ernest Hemingway को उपन्यास केवल ६ शब्दको छ। जसलाई संसारकै छोटो उपन्यासका रुपमा पनि ब्याख्या गर्ने गरिन्छ। उनको उपन्यास यस्तो छ:
बिक्रीका लागि : कहिले नलगाइएको बच्चाको जुत्ता
विकिपीडियामा उनको उपन्यासबारे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
It is not Novel, it isaadvertise of product.
फेब्रुअरी १४ प्रेम गर्नेहरुका लागि बिशेष दिन अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे । रोमका सन्त भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा मनाइने प्रेम दिवसको दिन हो यो ...
स्मार्टफोन किन्नुअघी जान्नै पर्ने १० कुराहरु (Smartphone Buying Guide)
के तपाईं स्मार्ट फोन किन्दै हुनुहुन्छ? तर कस्तो स्मार्ट फोन किन्ने ? कत्रो स्क्रिन साइजको, कस्तो डिस्प्ले भएको स्मार्टफोन कहिले किन्ने ? क...
Archive August (1) February (2) September (1) May (1) October (1) June (1) February (5) December (9) November (19) October (10) September (135) August (236) July (213) June (161) May (55) April (3) March (1) February (13) January (13) December (23) November (23) October (9) September (5) August (6) July (3) June (15) May (2) April (1)
Akabar-Birbal Story Amazing World Astrology Buying Guide Career E-Business Education Funny Video Guest Column Health Tips Jokes Literature Love Movie Music Nepali FM Online Nepali Songs Nepali TV Live Online Photo Feature Political News Poll Promo Recipes Relationship Social News Special Sports Swett Marden Technology Travel & Tourism Valentine's Day Video सफलताको रहस्य(Secrets of Success)
Music (1) Sports (300) Technology (18) Video (2)
Akabar-Birbal Story (7) Amazing World (26) Career (4) E-Business (1) Funny Video (2) Health Tips (19) Nepali FM Online (18) Nepali TV Live Online (6) Technology (18) Travel & Tourism (7) Video (2)